अन्तत: दुई मन्त्री प्रचण्डको सम्पर्कमा , फेरी माओवादी केन्द्रमै ! - Juneli Daily
अन्तत: दुई मन्त्री प्रचण्डको सम्पर्कमा , फेरी माओवादी केन्द्रमै !
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र छोडेर ६ जना नेता एमालेमा गई मन्त्री बनेपछि उनीहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अनि्तम चरणमा पुगेको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका उनीहरुमध्येमाओवादीले केही नेताहरुलाई फकाइरहेको छ ।
त्यसका लागि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललगायतका नेताहरु सक्रिय छन् । अहिलेसम्म गतिलो संकेत भने उनीहरुलाई पाइसकेका छैनन् । तर, कैलालीबाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी र रौतहटबाट निर्वाचित प्रभु साह भने माओवादी केन्द्रसँग संवादमै छन् ।
चौधरी र साहले माओवादी केन्द्रको जनमतमा पनि केही क्षति पु¥याएको आंकलन गरेर उनीहरुलाई फकाउने प्रयासमा छन् ।
रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई भने माओवादीले खासै महत्व दिएको छैन । तर, साहका कारण रौतहटमात्र होइन, प्रदेश २ का धेरै जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । केही प्रदेश सांसद पनि साहतिर लागेका छन् ।
चौधरीसँग पनि माओवादीका नेताहरु सम्पर्कमा छन् । लेखराज भट्टसंग छलफल गरेर ओलीतिर लागेका चौधरी खासमा प्रचण्डसँग थिए । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा प्रचण्डसँगै हिंडिरहेका थिए ।
आन्दोलनका लागि सिंहदरबारतिर लागेका चौधरी साँझ मन्त्रीको सपथ खान पुगेका थिए । तर, पनि माओवादी चौधरीलाई फकाउने प्रयासमा रहेको श्रोत बताउछ ।
त्यसैले माओवादीको राम्रो प्रभाव रहेको प्रदेश २ मै जनमत झनै खस्किने अवस्था आए आउँदो निर्वाचनमा झनै कमजोर हुने आंकलन गरेको माओवादीले साहलाई जुनसुकै मूल्यमा भएपनि फिर्ता ल्याउन संवाद गरिरहेको बिश्लेषकहरुको बिश्लेषण छ । साहले सकारात्मक संकेत भने गरेका छैनन् ।